Semalt: Nzira yekudzivirira sei Zita rako rePepanhau neShokofence Security
Kusvika ikozvino, WordPress inofungidzirwa kuti ndiyo yakakurumbira uye inoshandiswa zvakanyanya kwehuwandu hwehupenyu hwehutano. Asi isu hatigoni kufuratira chokwadi chekuti haisi yakarurama uye yakachengeteka sezvo vazhinji vevavhiringidzi vane utsinye vanoshanda munzira dzekupindira nzvimbo dzako uye kukuvadza hurongwa hwako kusvika pamwero mukuru. Kana iwe wakavaka webhusaiti kana uchitotanga bhizinesi, zvakakosha kuchengetedza mapeji ewebhu uye kudzidza mamwe mazano munyaya iyi.
Wordpress 'kuchengetedzwa uye mukurumbira zvinouya zvakanaka, uye kune zvakawanda zvezvigadziri zvakagadzirirwa kukubatsira kuchengetedza nzvimbo dzako kuchengeteka kubva kumusoro kusvika pasi. Shokofence kuchengeteka ndeimwe nzira yakadaro inochengetedza kuchengetedzwa kwewebsite yako, uye pano Julia Vashneva, nyanzvi yepamusoro kubva Semalt , achakuudza kuti ungashandisa zvakanakisisa sei - onde comprar ray ban online.
Kutanga kweShokofence Security Plugin
Shoko reShokofence Rakachengetedzwa rave rakagadzirwa nevanhu vashoma chete uye ishoko rakakwana re WordPress plugin. Inogona kuwanikwa mune chikamu chepauginji cheShokoPress uye inoita kuti vashandi vararame nzvimbo dzavo. Vanogona kuva nechokwadi chekuchengetedzwa kwemasayiti avo vachishandisa iyi plugin sezvo ine nhamba yezvikamu uye yakagamuchira mhinduro yakaipisisa kubva kuvashandisi vekare. Iyo inouya nemaoko mashomanana ezvasarudzo uye unhu hunoita kuti utange zvaunotarisira.
Plugin iyi inokubvumira kuti uone maSpanishPaiti kuitira kuti zvigone kushaya simba, bots, virusi uye, malware. Inonyevera vashandisi kuburikidza ne emaimeri kana zvimwe zvipingamupinyi zvinowedzera mukati mezuva. Inopa rubatsiro nemamiriro ekugadzirisa akakwirira uye kuchengetedzwa kwezviyero. Pakupedzisira asi kwete zvishoma, iyi plugin inogona kubvisa zvose maIndaneti ayo anotarisa kusvibisa uye ari kutumira zvinyorwa zvenhema kumasero ako..
Gadzirai Wordfence Security plugin
Zvakananga kuisa Wordfence Security plugin. Nokuda kweizvi, unofanirwa kugara uchifunga nezvezvinhu zvishoma:
1. Chinhu chekutanga ndechokugadzirisa matanho ekuchengetedza. Iwe unogona kutanga izvi kuburikidza nekukanda uye kuita shanduro yeShokofence. Pano iwe unofanirwa kuwana Basic Options chikamu uye chengetedza bhokisi kuti uwane kuchengeteka. Kana waita kuti uite, iwe unofanira kuchengeta mupfungwa kuti password haigone kuchinjwa, saka hapana chikonzero chekuedza kakawanda. Kana iwe ukaita izvi, nzvimbo yako inogona kunge yakavharwa kwekanguva kana kusingaperi.
2. Chinhu chechipiri chiri kuita kuongorora kwewebsite yako nguva dzose. Kazhinji kacho, vanhu vanorega kutarisa nzvimbo dzavo, uye iyi ndiyo inoshandiswa nevatengesi. Shoko rinonzi Wordfence Scan rinoita kuti uone nzvimbo yako nezvose, uye kunokubatsira kubvisa zvinhu zvinokuvadza uye zvirwere zvinotapukira kana chero.
3.Nhanho yechitatu uye yekupedzisira inogadzirisa kuchengetedzwa kwekuchengeteka kwezveramangwana. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuenda kune chekuchengetedzwa kwemashoko chikamu muShokofence Security. Iwe unofanirwa kuibatsira uye kuisa email yako ID iyo iwe unoda kugamuchira zizivo pamusoro pezvokuchengetedza.
WordPress kuchengetedzwa hakufaniri kutorwa pasina. Sezvo iwe unyanzvi webhusaiti webhusaiti, iyo ibasa rako kubvisa marudzi ose e-malware uye bots kana iwe uchida kuvandudza nzvimbo yako yekutsvaga pa internet.